COVID-19 sosokevitra fanakanana / famafana angona azo inoana fa manimba kokoa noho ny manampy, hoy ny tatitra PERC
Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » COVID-19 sosokevitra fanakanana / famafana angona azo inoana fa manimba kokoa noho ny manampy, hoy ny tatitra PERC
Tatitra vaovao navoakan'ny filankevitra momba ny fikarohana fikarohana momba ny politika sy toekarena (PERC) no nahitana fa ny fepetra fanakanana / fanesorana ny angon-drakitra hiatrehana ny tsy fahombiazan'ny COVID-19 dia hampihena be ny fahazoana trosa raha tokony hampiharina izy ireo. Ilay tatitra, mitondra ny lohateny hoe "Fiantraikany avy amin'ny faneriterena ny angon-drakitra manala baraka ny angon-drakitra amin'ny fitaterana trosa," dia naneho ny fiatraikan'ny tsindry hazo lena sy ny famafana ny fampahalalana ratsy momba ny trosa.
Nandritra izay 18 volana lasa izay, ireo mpanao politika any Etazonia ary manerantany dia nitolona tamin'ny olana sarotra amin'ny fanidiana tsena amin'ireo fepetra fitsaboana ilaina. Eo an-toerana, ny valin'ny tatitra momba ny trosa somary tery sy kendrena avy amin'ny lalàna CARES dia toa nahomby tamin'ny ankapobeny. Na izany aza, nisy ny antso nataon'ny mpikambana sasany tao amin'ny kaongresy ny fandraràna tanteraka ny rafitra tsy hitaterana trosa momba ny fampahalalana ratsy, mandrakotra ny mpanjifa rehetra nandritra ny (nandritra ny vanim-potoana vitsivitsy taorian'io) ny krizy COVID-19 - politika antsoina hoe "famoretana sy famafana . ”
Raha mizotra amin'ny làlana tsara any Etazonia ny valanaretina, dia tsy tafavoaka ny ala velively ny firenena. Miaraka amin'ny 22% ny mponina amerikana mbola tsy vita volo, ary ny tahan'ny vaksiny ambany dia ambany manerantany, misy ny fotoana betsaka ahafahan'ny kirizy ara-pahasalamana mihemotra. Raha mitranga izany dia mety halaim-panahy ireo mpanao lalàna hametraka fepetra fanakanana / famafana mba hiarovana ny mpanjifa. Ankoatr'izay, ny fampiharana kely kokoa an'io fomba io dia nampidirina tao amin'ny kaongresy farany teo ho fanitsiana ny National Defense Authorization Act (NDAA). Na dia nokasaina tsara aza, toy ny refy midadasika kokoa, ny fampiharana tery kokoa dia toa manimba ny mpindrana noho ny manampy - amin'ity raharaha miaramila mavitrika ity.
Ny tatitra PERC dia nahatsikaritra fa miaraka amina politikam-pamoretana / famafana lehibe kokoa dia miakatra ny salan'isan'ny trosa - saingy tsy ampy hifanaraka amin'ny fiakarana eo amin'ny isa naoty fampiasan'ny mpampindram-bola hanapa-kevitra izay mpindrana holavina sy hanaiky. Ohatra, rehefa afaka enim-bolana ny famoretana / famafana dia tafakatra 699 ny isa nahena fa ny salan'isan'ny isa indridra dia mitombo hatrany amin'ny 693. Ny elanelana misy eo amin'izy roa dia mihalehibe rehefa mandeha ny fotoana, midika izany fa mbola misy politika fameperana lava, arakaraka ny habetsahan'ny olona izay tsy mahazo miditra amin'ny crédit mainstream mora vidy.
Ny porofo avy amin'ny fandinihana vaovao dia mampiseho ihany koa fa ireo mindrana tanora, mpampindram-bola ambany, ary mpindram-bola avy amin'ny vondrom-piarahamonina vitsy an'isa dia hiaina ny fiantraikany ratsy lehibe indrindra. Ohatra iray, na dia nihena 18% aza ny fanekena trosa ho an'ny vahoaka manontolo, dia nilatsaka 46% izany ho an'ireo indram-bola indramina. Sehatra iray hafa, ao anatin'izany ny fiatraikany amin'ny loza ara-moraly amin'ny politikam-pamoretana / famafana, dia nahita fidirana am-bola ho an'ny ankizy 18 ka hatramin'ny 24 taona nihena 90% nahagaga. Ny fiatraikany lehibe toy izany amin'ny sokajin-taona iray dia mety hisy fiatraikany maharitra amin'ny fahafahan'izy ireo mamorona harena sy manangana fananana - manamarika fa nitolona teo alohan'ity Gen-Xers sy Boomers tamin'ny taonany ity i Millennial. Raha ny vola miditra dia nilatsaka 19% ny vondrona fidiram-bola ambany indrindra fa ny 15% kosa ny avo indrindra - ny fahasamihafana 27%. Ho an'ny mpikambana ao amin'ny ankohonana amin'ny faritra fotsy sy tsy Hispanika dia nidina 17% izany, fa tany amin'ny faritra be mainty kosa dia nilatsaka 23% izany, ary tany amin'ny faritra maro an'isa Hispanika dia 25% no nilatsaka.
Ny fikarohana efa ho roapolo taonan'ny PERC dia nifantoka tamin'ny fampiasana tompon'andraikitra amin'ny angon-drakitra hanitarana ny fampidirana vola. Ity fandinihana ity dia fitohizan'ny taratasy fotsy teo aloha mitondra ny lohateny hoe "Ny Fanampiny dia Tsara Kokoa noho ny Fanesorana: Ny loza ateraky ny famoretana ny angona sy ny tombony azo amin'ny fampidirana angon-drakitra tsara kokoa amin'ny fanaovana tatitra momba ny trosa." Nandinika ny fikarohana teo aloha momba ny famafana data ary naneho ny valiny tsy tapaka fa manimba ny mpindrana ny famafana data. Mifanohitra amin'ny famoretana / famafana, ny fikarohana nataon'ny PERC dia nahatsikaritra fa ny fampidirana data tsy fandoavam-bola amin'ny tatitra momba ny trosan'ny mpanjifa dia mampitombo ny fidirana amin'ny crédit amin'ny findramam-bola (olona ambany fidiram-bola, Amerikanina tanora sy antitra, vondrom-piarahamonina vitsy an'isa ary mpifindra monina).
Ny tatitra dia nanolo-kevitra ny hanisy tahiry fandoavam-bola tsara (ara-potoana) an'ny telecoms, TV tariby sy zanabolana ary orinasan-tserasera malalaka amin'ny rafitry ny tatitra fa tsy mamafa ny tahiry fandoavam-bola ratsy (tara). Ny fampidirana ireo angon-drakitra mialoha amin'ny alàlan'ny fantsona nahazo alalana ho an'ny mpanjifa dia mety hanampy amin'ny fanimbana ny fahasimban'ny data tahiry trosa mahazatra vokatry ny areti-mandringana.
Ny filoham-pirenena sy ny CEO an'ny PERC, Dr. Michael Turner, dia nanambara fa: "Ireo mpanao politika amerikana dia nahavita fifandanjana marefo tamin'ny alàlan'ny lalàna CARES - izay nandaitra. Mandroso anefa, asehon'ny fandinihana fa tsy maintsy manitsaka tsara izy ireo. ” Dr. Turner dia nanondro ny mety hisian'ny olona voaroaka noho ny fanakanana / famafana dia hitodika any amin'ny mpampindram-bola lafo vidy (fivarotana pawn, mpampindram-bola, mpampindram-bola) hamaly ny tena filan'izy ireo trosa. "Mihevitra izahay fa izao no fotoana tokony hiasan'ny Kongresy hampiroborobo ny fampidirana ireo angona hafa amin'ny tatitra momba ny trosan'ny mpanjifa," hoy i Turner nanampy.
Ny mpanorina ny Society for Financial Education & Professional Development (SFE & PD) sy ny filoha Ted Daniels dia nanampy hoe: "Ny tatitry ny PERC momba ny fanaovana tatitra momba ny trosa dia misy fampahalalana tena ilaina satria manome antsipirihany ny fomba nanakanana ny fepetra fanakanana / famafana data COVID-19 izay mampihena ny fahazoana miditra amin'ny mpanjifa, indrindra fa vahoaka vitsy an'isa. Ankoatr'izay, ny tatitra PERC dia mampiseho ny filàna fanambarana tsy ara-drariny sy marina momba ny tahirim-bola rehetra - toy ny angon-drakitra fandoavam-bola amin'ny telecoms, TV tariby sy satelita ary fantsom-pifandraisana malalaka - ho tatitra momba ny trosa. ”